Mushure memakore gumi DOSBox yakagadziridzwa uye inosvika pane yayo nyowani vhezheni DOSBox 10 | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore gumi ekupedzisira kuburitswa kwakakurumbira kweiyo DOSBox emulator vhezheni itsva yeiyi emulator inosvika iyo yakatorwa nevateveri uyo akatanga chirongwa chitsva, chakaunganidza vateveri vazhinji uye vakashanda pazvikwata zvakasiyana siyana kuitira kuti iyi vhezheni itsva isvike.
Kune avo vasingazive DOSBox, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi muchinjikwa-chikuva MS-DOS emulator yakanyorwa uchishandisa raibhurari yeSDL uye yakagadzirirwa kumhanyisa mitambo yeDOS yakare paLinux, Windows, uye macOS.
Izvo zvakakosha kutaura kuti iyi nyowani chirongwa che "DOSBox Staging" inogadzirwa nechikwata chakasiyana uye haina kubatana neiyo yekutanga DOSBox, mune chete shanduko diki dzakaonekwa mumakore achangopfuura.
Pakati pezvinangwa neDOSBox Staging pane kupihwa kwechigadzirwa chiri nyore kushandisa, kurerutsa kubatanidzwa kwevagadziri vatsva (semuenzaniso, kushandisa Git panzvimbo yeSVN), shandira kuwedzera mashandiro, tarisiro huru pamitambo yeDOS, uye rutsigiro rwemapuratifomu emazuva ano.
Zvinangwa zveiyo purojekiti hazvisi zvekupa rutsigiro lwenhaka masisitimu akadai seWindows x neOS / 2, uye kutarisa kutevedzera DOS Hardware. Basa guru nderekusimbisa kuita kwemhando yepamusoro kwemitambo yakare pane masisitimu emazuva ano (rakasiyana dosbox-x forogo iri kugadzirwa kutevedzera timu).
1 Chii chitsva muDOSBox Staging 0.75?
Chii chitsva muDOSBox Staging 0.75?
Mune iyi vhezheni itsva vebudiriro vatori vechikamu vakatarisa mukuchinjira kune SDL 2.0 midhiya raibhurari uye icho chakapedzwa zvinobudirira, pamwe nacho nerutsigiro rwe SDL 1.2 yabviswa, kuwedzera kune izvo zvakare zvinopihwa Tsigiro yemhando dzakasiyana dzemazuva ano maAPI, kusanganisira kuwedzera kwe "nyowani" nyowani nzira yekubuda, iyo inogona kushanda kuburikidza neOpenGL, Vulkan, Direct3D kana Metal.
Padivi rekuvandudzwa tinowana kuti DOSBox Staging 0.75 ine rutsigiro rweCD-DA mafaera (Compact Disc-Dhijitari odhiyo) mumafomati FLAC, Opus uye MP3 (yaimbotsigirwa WAV neVorbis).
kunze kwaizvozvo yakawedzera rutsigiro rwezvisarudzo zvakakwirira, iyo inosanganisira kuita chaiyo pixel yekuyera modhi asi ichigara ichiedza kuchengetedza chimiro, semuenzaniso, kana uchitanga mutambo we 320 × 200 pa 1920 × 1080 skrini, mapikisheni anozowedzerwa 4 × 5 kuwana 1280 × 1000 mufananidzo pasina kukanganisa.
Marongero ekushandura akachinja. Nokusingaperi, OpenGL-based backend inoshandiswa ne4: 3 factor ratio kuyera uye kururamisa uchishandisa OpenGL shader. Dynamic yekuvakazve rutsigiro yakawedzerwa ye64-bit CPUs uye monochrome uye zvinoumbwa zvinobuda modes zvakawedzerwa zvemitambo yakanyorerwa CGA mifananidzo yemakadhi.
Yeimwe shanduko dzataurwa yeiyi vhezheni itsva:
Wakawedzera kugona kwekudzikisira pawindo.
Iwo AUTOTYPE rairo yakawedzerwa kuteedzera yekuisa keyboard, semuenzaniso kupfuudza saver screen.
Maitiro matsva ekugadzirisa maitiro e mouse akawedzerwa.
Nekukanganisa, iyo OPL3 Nuked emulator inoshandiswa, iyo inopa zvirinani kuteedzera kweAdLib uye SoundBlaster.
Wakawedzera kugona kushandura hotkeys pane nhunzi.
Iko kumisikidzwa kweLinux kwaendeswa ku ~ / .config / dosbox / dhairekitori.
Wakawedzera rutsigiro rwekushandisa GLSL shader kuti ikurumidze kupa kweanoteedzera kuburitsa.
C ++ 11 mitauro inogadzirwa zvino yabvumidzwa.
Inoenderera mberi Sanganisa (CI) sisitimu yakaitwa iyo inovimba pane yega push yekodhi kuti ipe nekukurumidza mhinduro kune vanogadzira
Yakawedzera static ongororo yekutarisa neLLVM's Clang, Synopsys Coverity, uye VIVA64 Chirongwa Verification Systems (PVS) Studio.
Dynamic scan cheki inoitwa naClan's Undefined Behaeveal (UB) Sanitizer uye GCC UB uye Kero Sanitizers zvakawedzerwa.
Inovaka zvakachena pane ese akatsigirwa macomputer uye mapuratifomu
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Kune avo vanofarira kugona kuisa iyi nyowani vhezheni, vanogona kubvunza rairo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mushure memakore gumi DOSBox yakagadziridzwa uye inosvika pane yayo nyowani vhezheni DOSBox 10